Iyini inombolo ye-ID yomkhiqizo we-Amazon?
Njengomthengisi we-Amazon, kufanele uqaphele ukuthi umkhiqizo ngamunye ku-Amazon unenombolo yakhe ye-ID. Izihlonzi zomkhiqizo zingasetshenziselwa ukwakha amakhasi omkhiqizo omusha kanye nokufakwa ohlwini. Izigaba eziningi e-Amazon zine-UPCs yazo eqondile. Umkhiqizi oyedwa kuphela we-Amazon UPCs okhona emhlabeni wonke yi-GS1 (Global Standard 1). Le nkampani inikeza izindinganiso zomhlaba wonke zokubhalwa kwezinto zokuthengiswa. I-Standard Standard 1 inika yonke into e-Amazon ngeNombolo ye-Global Trade Item.
Ukuze ulandele izidingo ze-GS1, udinga ukucabangela uhlobo lwemikhiqizo ofuna ukuyithengisa, ikhwalithi yedatha yakho yomkhiqizo, kanye nezidingo ezithile zokuthengisa kulesi sigaba somkhiqizo.
Kulesi sihloko, sizochaza indima ye-GTIN kanye ne-UPCs ekukhuthazeni umkhiqizo wakho ku-platform ye-Amazon yomhlaba wonke wokuhweba.
Noma kunjalo, ngaphambi kokuba siqhubeke nokunye okunye, kufanele ngiqaphele ukuthi ama-Amazon azoqala ukuhlola amakhodi we-UPC abelwe ama-ASIN ahlukene emakethe yawo emininingwaneni ye-GS1. Kungasho ukuthi noma yimuphi umdayisi ngaphandle kwamakhodi we-UPC angasuswa angasuswa kumiphumela yokusesha ye-Amazon.
Ama-UPC amakhodi e-Amazon: yiziphi futhi kungani sidinga?
Ikhodi ye-UPC ibonakaliso lwekhodi yebhasi elinikezwe ngokukhethekile into ngayinye yokuhweba. Liyasetshenziswa kakhulu e-US, UK, Canada, Australia, New Zealand, namanye amazwe angamaNgisi. Iqukethe izinombolo eziyizinombolo eziyi-12 ezibonisa isibalo se-UPC yenkampani, isithenjwa sento, bese uhlola amanani. Izinombolo zokudijithali zokuqala ezinikezwe i-GS1 kubanikazi bezinhlamvu ezikhonjiwe ngokukhethekile kufanele zimake imikhiqizo ngezimpawu ze-UPC.
Amadijithi amahlanu alandelayo akhonjiswa ukubonisa into yento. Banikezwe umnikazi wemikhiqizo ukuthi babhekise into ethize.
Futhi idijithi yokugcina ibizwa ngokuthi idijithi yokuhlola. Idijithi ebalwa ngokusekelwe ekubaleni kwe-MOD yokuhlola amanani kusukela kumadijithi asandulele.
Amakhodi we-UPC angaba nezinhlobo ezimbili - UPC-A no-UPC-E. Umehluko wukuthi ikhodi ye-UPC-E imfushane futhi inezintambo ezicishiwe. Kusho ukuthi ngeke ubone ama-0 ngaphakathi kwebhakhodi, kuphela ngaphakathi kwe-GTIN ehambisanayo.
Iyini i-ASIN (Inombolo ye-Amazon Standard Identification)?
Izinombolo ze-Amazon Standard Identification zisetshenziselwa ukukhomba izinto ku-Amazon. Zinezinhlamvu eziyingqayizivele zezinhlamvu ezingu-10 namanani. Ikhodi ye-ASIN yezinto ezidingekayo ongayithola ekhasini lelwazi le-Amazon lomkhiqizo. Kufanele kuqashelwe ukuthi kuma-Amazon ezincwadi zisebenzisa i-ISBN ibhakhodi. Inombolo yokuhlonza ejwayelekile ifana nezincwadi njenge-ISBN. Nokho, kuzo zonke ezinye izinto, inombolo entsha ejwayelekile idalwe lapho into ilayishwa kwikhathalogi ye-Amazon.
Ikhodi ye-ASIN yegama itholakala ekhasini lemininingwane yomkhiqizo phakathi kweminye imininingwane yomkhiqizo njengombala, usayizi, njll. Le khodi ingasetshenziswa ukucinga imikhiqizo kwikhathalogu ye-Amazon. Ngokuthayipha i-ASIN ecacile noma ikhodi ye-ISBN ebhokisini lokusesha le-Amazon, uzothola imiphumela yokusesha edingekayo ngalekhodi (esimweni sokuthi umkhiqizo ubhalwe kuhlu).